GNOME 3.38.6 inogadzirisa bugs yeUbuntu 21.04 desktop | Linux Vakapindwa muropa
GNOME 3.38.6 inosvika ichigadzirisa bugs uye kuvhara kwedesktop izvo zvicharamba zvichishandisa Ubuntu kusvika Gumiguru
Kanopfuura mwedzi uye nehafu yapfuura, chirongwa icho chinogadzira imwe yematafura anozivikanwa anowanikwa kuLinux yakakanda v3.38.5 zvakafanana. Maawa mashoma apfuura akakanda GNOME 3.38.6' svetuka.
Ndicho kugadzirisa kugadzirisa, uye zvinoreva kuti hazviuye nezvakaratidzwa maficha. Izvo zvinosanganisira kuvandudza, uye chinhu chakanakisa chinogona kuitika kwatiri mune idzi kesi ndechekuti mumwe wavo anogadzirisa bug inotsamwisa iyo isu tave tichisangana nayo kwemavhiki. Pazasi iwe une runyorwa rwemashoko akakosha asvika neGNOME 3.38.6.
Pfungwa dzeGNOME 3.38.6
Epiphany ikozvino inogona kuvhurisa mushandisi-yakaitwa yekunze ma URL.
Faira Roller inogona kusvetuka mafaera ne symlinks.
Yakagadziriswa yakawandisa CPU yekushandisa muGedit iyo inogona kuitika kana faira rine zvemukati rakabviswa kubva mufaira rekutsvagisa plugin. Kune rimwe divi, ikozvino rave kushandisa gwaro razvino nzira kana uchivhura faira nyowani kugadzirisa kudzokorodza.
Iyo Music application, iyo yandinofanira kutaura kuti ini ndichangobva kuyedza, ini ndakaifarira, asi ini ndinofunga inoda kuvandudzwa, yakagadzirisa mashoma mashoma ehutachiona, sekuvharwa kusingatarisirwe uye kumwe kudzokorodza mufananidzo.
Tsigiro ye / dev / rfkill yakagadziridzwa nematsva matsva.
Yakagadzirisa kukiya kwakaitika pakange pasina nguva iripo.
Inodzivirira otomatiki kubuda kubva muchirongwa kana zvisina kukodzera.
Iye zvino zvinongoratidzira chete kuzivisa nezve yakaderera bhatiri kune ekunze zvishandiso kamwe
Iyo nyowani vhezheni inofanirwa kurova Linux kugovera inomhanya GNOME 3.38 munguva pfupi, kusanganisira iyo yakambotaurwa Hirsute Hippo. GNOME 3.38 icharamba ichitsigirwa kwemwedzi mishoma, asi zvese zvavanoburitsa zvichave shanduro dzekugadzirisa bugs. Nhau dzakanaka dziri muGNOME 40.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » GNOME 3.38.6 inosvika ichigadzirisa bugs uye kuvhara kwedesktop izvo zvicharamba zvichishandisa Ubuntu kusvika Gumiguru
postmarketOS yakawedzera chimiro che smartwatch
Edge yave kuwanikwa mubeta yeLinux anoshanda masystem